ကျူးကျော် မိသားစု တစ်သိန်းခွဲကျော်ကို အိမ်ရာ စီစဉ်ပေးနိုင်ရေး ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမျ - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၂၄
ကျူး ကျော်မိသားစု တစ်သိန်းခွဲကျော်ကို အိမ်ရာစီစဉ်ပေးနိုင်ရန် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ဆွေးနွေး မှုများပြုလုပ်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုး မင်းသိန်းက ပြောသည်။ သြဂုတ် ၂၄ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဒုတိယတစ်နှစ်တာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသတင်းစာ၏ မေးမြန်းမှုကို ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ကျူးကျော်နေထိုင်သူ မိသားစုပေါင်း တစ်သိန်းခွဲကျော် ရှိနေပြီး ၎င်းတို့အတွက် အိမ်ခန်း ပေါင်း တစ်သိန်းခွဲကျော်ကို နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဖြင့် ဖော်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်ရာ ပြည်တွင်းရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများနှင့် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။ ”ကျွန်တော့်ရဲ့အမြဲတမ်း စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ issue တစ်ခုကတော့ ကျူးကျော်ကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဆောင် ရွက်ရမယ်ဆိုရင် ကျူးကျော်တွေကို ကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘဝကို ကျွန်တော်တို့ မြှင့်တင်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လာဆွေးနွေးတဲ့သူတွေက တော့ ပြောတယ်။ သူတို့တွေဟာ အမှိုက်တွေ သူတို့စက်ရုံတွေရှေ့မှာလာပြီး ပိတ်နေတာ။ ဒီလူတွေက လာပြီးတော့ သူတို့အကျိုးစီး ပွားရှာနေတာ။ အဲဒီလိုလာပြီးတော့ ဆွေးနွေးနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့လူသားအရင်းအမြစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ကို မမြှင့်တင် ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မြို့ဟာ တကယ့်ကို ဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေ ပျက်ပြားပြီး ဆိုးမွေတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို ထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကျူးကျော်နေထိုင်သူ (မိသားစု) တွေအားလုံးက တစ်သိန်းခွဲလောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဒီတစ်သိန်းခွဲဟာ တိုက်ခန်း တစ်သိန်းခွဲ ဝယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေကို တိုက်ခန်းတစ်သိန်းခွဲ ရောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အဆင် ပြေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ကျွန်တော် တို့မေးပြီးပါပြီ။ (တစ်လလျှင် ငွေ ကျပ်) ခုနစ်သောင်း၊ တစ်သိန်း လောက်ဆိုရင် သူတို့ပေးနိုင်တယ်။ သူတို့ကို နှစ်ရှည်ချေးငွေတွေနဲ့ သူတို့ကို ဒီအိမ်တွေကို ဆောက်ပေး နိုင်မလား။ ဒါသူတို့ဘက်က လိုချင်ပါတယ်။ သူတို့လည်း ဒီရေဗွက်၊ ရေအိုင်ထဲက ကျူးကျော်ဘဝက လွတ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလာလုပ်မယ့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကြီးကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒါဟာနှစ် ရှည်ချေးငွေတစ်ခုနဲ့ အနှစ်သုံး ဆယ်လောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းပြန်ရမယ်။ အကျိုးလည်းရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်း နှီးမြှပ်နှံမှု သေးသေးသမားကတော့ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဆူလွယ်နပ်လွယ်ကို လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနှစ်ရှည်ကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက် အင်အားနည်းပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ဆိုသည်။
လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းအတွင်း ကျူးကျော်များကို အိမ်ရာစီ မံပေးနိုင်မလားဟု ဒီမိုကရေစီတူ ဒေး၏ မေးမြန်းမှုကိုမူ ဝန်ကြီးချုပ်က ထည့်သွင်းဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။ လက်ရှိအချိန်တွင် အခြေအ နေအရပ်ရပ်အရ ရန်ကုန်သို့ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက် နေရသည့် ကျူးကျော်နေထိုင်သူများရှိသလို ၎င်းတို့ကို အခွင့်ကောင်း ယူကာ စီးပွားရှာနေသူများလည်းရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။ ယင်းအပြင် ကျူးကျော်နေရာများကို ခြေကုပ်ယူကာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်နေမှုများလည်းရှိပြီး ယင်း အခြေအနေများကို ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ”ဒီအခြေအနေတွေအားလုံး ကို ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်နိုင်ရေး ကျွန် တော်တို့ ကြိုးပမ်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွက် အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်
မြောက်ကိုရီးယားဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးသံတမန်အဖြစ် ဖို့ဒ်ကုမ္ပဏီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကို ခန့်အပ် တာဝန်ပေ
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖရဲသီးတင်ပို့ရန် ကားခဈေးကြီးခြင်းကြောင့် ဖရဲစိုက်တောင်သူများ အခက်အခြဲ??
ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် မြေတိုင်ကန်ကျေး ရွာတွင် အောင်ဆန်းစု ကြည် ကျောင်းဆောင် သစ်လွှဲ ပြောင်းပေး ?
ခြေဥ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ အစည်းအဝေး လွှတ်တော် နားရက်များတွင်ပါ ဆက်တိုက် ကျင်းပမည်